Kusukela kwesokunxele: Elebhu ye-SCP yeFiziksi yonyaka wesibili uMnu Luan Lombard, uMnu Dauda Sheni, uMnu Jehoiakim Pillay, uMnu Rucille Ramlal kanye noNkks Nuzhat Amod.
Kulungiselelwa Ukuphumelela ku-International Physics Olympiad
UDkt Mervlyn Modley weSikole Sekhemistri neFiziksi (i-SCP) useqede iviki elola amakhono ethimba labafundi abahlanu baseNingizimu Afrika abenza ibanga le-12 eliyoncintisana ku-49th International Physics Olympiad (IPhO) ese-Libson, e-Portugal, zingama-21 kuya ku 29 kuNtulikazi.
Lo mncintiswano ofaka izizwe ezahlukahlukene, ongenelwa ngokumenywa kuphela, waqala ngonyaka wezi-1967 ngezizwe ezinhlanu zobumbano zaseMpumalanga ezifaka ne-Poland njengabaphathi bomncintiswano. Lo mncintiswano uhlose ukuthatha abantu abasha abangakaziqali izifundo zeMfundo Ephakeme. Ababambe iqhaza kulonyaka abangama-432 baphuma emazweni angama-94. INingizimu Afrika yaqala ukubamba iqhaza kusukela ngonyaka wezi-2012.
Leli qembu labahlanu lase Ningizimu Afrika likhethwe kwinqubo ephindwe kabili kuzwelonke, uMnu Dauda Sheni wase Mitchell House ePolokwane, uMnu Jehoiakim Pillay wase Heather Secondary kanye no Rucille Ramlal wase Raisethorpe Secondary, bobabili abase-Mgungundlovu, uMnu Luan Lombard ephuma waseHoërskool Waterkloof e-Pretoria, kanye no Nksz Nuzhat Amod ophuma e-Orient Islamic School eThekwini.
UMoodley kanye noDkt Juggy Govender, umsebenzi osewathatha umhlalaphansi e-SCP, uzophelezela ithimba ukuya e-Portugal.
'Kuzoba ithuba elivelele kubafundi ukuhlangana futhi baxoxe nabanye oqondonqondo basemhlabeni abavela ezindaweni ezahlukene zempilo futhi ngiyethemba kuzobakhuthaza bafike ezingeni eliphakeme ezifundweni zabo,’ kusho uMoodley.
Lo mncintiswano uhlelwe uMnyango Wezemfundo kanye noMnyango Wezesayensi Nobuchwepheshe wasezweni labahleli bomncintiswano. Amalungu eqembu azohlolwa ngamunye kuthiyori kanye nomsebenzi wokubonisa, kuzothatha amahora amahlanu ngayinye, ngesikhathi sohlelo lwezemfundo oluhlanganiswe ongoti befiziksi abavela emaNyuvesi ahamba phambili e-Portugal. UMoodley uchazile ukuthi imibuzo yokuhlolwa isezingeni lemfundo ephakeme uma iqhathaniswa nefiziksi efundiswa ezikoleni zaseNingizimu Afrika, futhi kufakwe nemibuzo ephathelene nezihloko zocwaningo.
‘I-IPhO umcimbi ohlonipheke kakhulu emhlabeni jikelele futhi kuyinjabulo enkulu ukuthi i-UKZN ihlanganyele futhi ihlele ukuqeqeshwa kweqembu lazwelonke,’ kusho uMoodley. Wakwazi ukuqeqesha iqembu elikhethiwe ngaphambi kokufika kwalo e-UKZN ngoNhlangula (June). Kusukela kuNdasa (March), ukufunda nge-inthanethi okwasungulwa uMoodley kwenza amalungu eqembu akwazi ukufunda nge-IPhO esuselwa kwifiziksi yonyaka wokuqala eNyuvesi. Kwalandela ngokuqeqeshwa iviki lonke e-UKZN, njalo ekuseni iqembu lalihlanganyela ekufundeni ukuxazulula izinkinga, bese ntambama baqinisa ekuloleni amakhono abo ngomsebenzi abangawenza ngokuba babe ingxenye yomsebenzi wefiziksi owenziwa kunyaka wesibili.
‘Ngenxa yemfundo yaseNingizimu Afrika engeyinhle ezikolweni ezifundisa ifiziksi kanye nezibalo, kuwumsebenzi onzima ukufinyelelisa iqembu kulezinga laphesheya,’ kusho uDkt Moodley.
Uchazile ukuthi uhlelo lokuqeqesha olusetshenzisiwe selakhula emuva kokuba iNingizimu Afrika yaqala ukuba ingxenye yalomncintiswano e-Estonia ngonyaka wezi-2012. ‘Kulo nyaka sibheke ukuthuthuka okukhulu kuyoyonke imiphumela,’ esho.
Amagama: U-Christine Cuénod
Isithome: uDkt Mervlyn Moodley
Enactus UKZN Clinches Place at Nationals
Kugujwa Umlando Kasaziwayo u-Mandela nge-Jazz
Bursaries for Diligent Humanities Students
Science in Action for High School Learners
The Capped Wheatear at Darvill
Creating Dialogues Through Art
Mandela 100 Celebrated Through Film
Learning the ABCs of PhD Proposal Writing
Guest Lecture on Mindful Leadership